DHAGEYSO: Maxaa looga hadlay kulankii Xildhibaanada BF ee maanta ? | DHAGEYSO: Maxaa looga hadlay kulankii Xildhibaanada BF ee maanta ? | Isha Wararka Sugan ee Soomaaliya	Thursday, July 20th, 2017	Home
DHAGEYSO: Maxaa looga hadlay kulankii Xildhibaanada BF ee maanta ?
Jul 12, 2017 - jawaab	Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo qeybiyay dib u eegista Miisaaniyada Dowladda oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyada Xukuumada Soomaaliya.
Maalinta Sabtida ee soo socota ayaa lagu balamay in Xildhibaanada Baarlamaanka laga hor aqriyay Warbixinta dib u eegista Miisaaniyada Dowladda ka dibna ay ka doodaan.
Dhanka kale Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Xildhibaanada Warbixin ka siiyay halka ay marayaan doodaha iyo Cabashada ay Xildhibaanada ka keeneen qaladaad ka dhacay Xaflada Furitaanka Kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka.
Xildhibaanada ayaa dhaliilay Heeso iyo Ruwaayad lagu soo bandhigay Xaflada Furitaanka Kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka oo ay Xildhibaanada ku tilmaameen in Xildhibaanada looga dan lahaa Heesaha iyo Ruwaayadahaasi.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa dhaliilay hadal uu jeediyay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ahaa in Baarlamaanka ay la dagaalamayaan hadii Mooshin ay ka keenaan Xukuumada Ra’isal Wasaare Xasan Cali Khayre.
Guddoomiye ku Xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in Xildhibaanada ay ku shaqeeyaan sharci iyo qodobo Dastuuri ah oo ay xaq u leeyihiin islamarkaana aysan dhaq jalaq u siin doonin Wararka qaar ee Warbaahinta laga sii deynayo.
Waxa uu tilmaamay in ay awood u leeyihiin in ay mooshin ka keeni karaan Xukuumada Soomaaliya hadii ay gudan weyso Waajibaadka loo igmaday.
Sidoo kale Guddoomiye ku Xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa Xukuumada Soomaaliya ugu baaqay in ay xoojiso Kalsoonida Xildhibaanada oo ay si dhaw ula shaqeyso.
Waxa uu tilmaamay in Xukuumada looga baahan yahay in ay ka fogaato dhaqamadihii hore ee Xukuumadihii dalka soo maray lagu arki jiray.
Ugu dambeyn Guddoomiye ku Xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay Warbaahinta Dowladda iyo Warbaahinada kale ee Madaxa Banaan in mar walbo laga sii daayo Warar iyo Barnaamijyo wax loogu dhimayo sharafta Xildhibaanada Qaranka.